बाघको लडाइँ : के काे लागी ? – KhabarKhurak
बाघको लडाइँ : के काे लागी ?
बाघ युद्धको कारण
१५ साउन, एक इन्च भूमिको लागि भयानक युद्धमा होमिने गर्छ मान्छे । मान्छेले शक्ति विस्तार गर्न युद्ध गरेको धेरै इतिहास छ । त्यही निहुँमा धेरैको रगत र पसिना बग्ने गर्छ ।बाघको आफ्नो क्षेत्र पहिचान र त्यसको रक्षाका लागि गर्ने युद्ध वास्तवमै रोचक छ ।आफ्नो अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यसको रक्षाका लागि मर्न र मार्न वन्यजस्तु समेत पछि पर्दैनन् । तीमध्ये पनि बाघ बढी लडाकु स्वभाव भएको वन्यजन्तु हो ।
पारिस्थितिक पद्धतिअनुसार मृगले घाँस खान्छ, बाघले मृग खान्छ । तर बाघलाई खाने जनावर जंगलमा भेटिँदैन । त्यसैले बाघलाई पारिस्थितिक पद्धतिको सबैभन्दा उच्च बिन्दूमा रहेको (टप कार्निभोरस) प्राणी मानिन्छ ।
एउटा पुरानो कथन छ ‘एउटै वनमा दुईटा बाघ रहन सक्दैन ।’ तर एउटै वनमा धेरै बाघ रहे पनि एउटै क्षेत्रमा भने दुईवटा बाघ रहन नसक्ने वन्यजन्तुका जानकारहरू बताउँछन् ।
कुनै पनि बाघले वयस्क भएपछि युद्ध गरेर आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न खोज्छ । बाघ जन्मिएको दुई वर्षमा वयस्क बन्ने गर्छ । वयस्क भएपछि डमरुलाई बघिनीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्छे । त्यसपछि वयस्क बाघ आफ्नो क्षेत्र खोज्दै अर्काेसँग युद्ध गर्न निस्कन्छ । बाघको जनसंख्या वृद्धि भएसँगै यस्ता लडाइँहरू बढ्ने गर्छन् ।
वयस्क बघिनीभन्दा बाघहरूको बढी लडाइँ हुन्छ । एउटा बाघको क्षेत्रभित्र तीनदेखि चारवटासम्म बघिनीहरू रहन्छन् । त्यही बघिनीसँग सम्भोग गर्नका लागि बाघले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्दै जान्छ । यो पनि झगडाको एउटा कारण हो ।
Tags: बाघ युद्ध
कोरोना अपडेटः भदौ ३० गतेकाे स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन – लाइभ हेर्नुहोस
घरबहाल तिर्न नसक्ने नागरिकलाई ननिकाल : सर्वोच्चकाे आदेश